Dibad baxyo ballaaran oo xalay ka dhacay magaalada Ankara (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Dadka dibad baxayay ayaa taageero u muujinayay dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Recep Tayyib Erdogan, waxaana ay aad uga faraxsanaayeen afgambigii fashilmay.
Xaalada Turkiga ayaa xalay aheyd mid ka duwan habeenkii isku dayga Afgambiga, waxaana dadka oo faraxsan ay isugu soo baxeen waddooyinka, iyagoo calanka Turkiga lulayay iyo sawirka Madaxweynaha.
Madaxweyne Erdogan ayaa meel fagaare ah kula hadlay dadweynaha, waxaana uu sheegay inuu todobaadkan sii socdo dibad baxyada looga soo horjeedo isku daygii afgambigii fashilmay.
Erdogan ayaa ku sugnaa xilliga uu bilaabanayay isku dayga afgambi magaalada loo dalxiis tago ee Marmaris, waxaana markii koox ka tirsan Milateriga qabsadeen meelo muhiim ah, waxaa uu ka hadlay Telefishin gaar loo leeyahay, isagoo isticmaalayay aalada Face Time oo shacabka dalkiisa uu kala hadlay.
Warbaahinta Caalamka ayaa sheegaya in adeega Face Time ay aheyd midii bur burisay isku daygii afgambi, isla markaana horseeday in shacabka Turkiga ay isugu soo baxaan waddooyinka, iyagoo adeecayay hadalkii Madaxweyne Erdogan.
Howl galadii lagu soo qabanayay dadkii ka dambeeyay isku dayga afgambiga, waxaana dadka la xiray ay gaarayaan illaa 3,000 oo ruux
Saraakiil Ka Socota Dowladda Iyo AMISOM Oo Ku Wajahan Magaalada Marka